Taninthayi Coast – Myanmar Biodiversity
Taninthayi Coast	rwong	2017-05-19T09:58:09+00:00
Zoomed map + description
ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော မျိုးစိတ်တစ်ခု ဆိုသည်မှာ မိမိနိုင်ငံသို့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြင့် တင်သွင်းလာခြင်း (သို့) မတော်တဆ ဝင်ရာက်လာသော မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမျိုးစိတ်သည် မိမိနေရင်းဒေသ ပြင်ပ၌ပင် ကောင်းစွာမျိုးပွား ရှင်သန်နိုင်သော အစွမ်းသတ္တိ ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် ထိုကဲ့သို့သော မိမိနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်မဟုတ်ပဲ အခြားဒေသမှ ဝင်ရောက်လာသော မျိုးစိတ်များစွာ ရှိကြပါသည်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်းနိုင်ငံဒေသများ၌ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ပိုမိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ အခြားဒေသတစ်ခုမှ တင်သွင်းလာသော မျိုးစိတ်အားလုံးသည် အန္တရာယ်ရှိပြီး [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-05-23T11:42:56+00:00	May 23rd, 2018|Categories: TSA, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments
A SURVEY in February has found that there are now 76 Ayeyarwady dolphins in the conservation areas of the Ayeyarwady River, an increase from 69 found in the last survey. Ayeyawady dolphins areacritically [...]
By Zin Min Htun| 2018-04-25T16:56:09+00:00	April 25th, 2018|Categories: Landscape, Ayeyawady River, Fishes, Gallery, Logging, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments
As The Myanmar literature itself is now more than 1000 years old, it is no wonder that the language is rich in proverbs, maxims and sayings. Asarule, Myanmar people tend to illustrate many [...]
By Zin Min Htun| 2018-04-25T15:36:57+00:00	April 25th, 2018|Categories: Landscape, News Blogs, Upper Chindwin, Wildlife, Birds, Climate Change, Gallery, Threats, WCS Myanmar|0 Comments
ကျိန္တလီချောင်းနံဘေးက ဘေးမဲ့တော၏ ကင်းစခန်းသို့ စက်လှေဆိုက်ကပ်ချိန်တွင်ပင် တော၊တောင်တို့၏ ရနံ့ သစ်များကို ရှုရှိုက်နေရပြီ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ တဲသုံး၊ လေး လုံးဖြင့် စခန်းကို ချောင်းကမ်းစပ်က မြင် နေ ရ သည်။ ဘေးပတ်လည်မှာတော့ တောတွေ၊ တောင်တွေက စိမ့်ညို၍ ၀န်းရံထားလျက်။ ဂွမြို့မှ ရတနာမြိုင်ကျေး ရွာသို့ ကားဖြင့် ၃၃မိုင်။ ယင်းကျေးရွာမှ သည်ကင်းစခန်းသို့ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် စက်လှေဖြင့်် ၁၃မိုင် စီးရပြီး လျှင် [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-03-28T15:10:39+00:00	March 28th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments
''လင်းတမှိုင် မှိုင်သည်''၊ ''စာသူငယ်ကြား လင်းတ နားသကဲ့သို့'' စသဖြင့် သူတို့ကို ''လန်းဆန်းတက်ကြွမှု မရှိခြင်း''၊ ''ကြီးမား၍ အကျည်းတန်သော ငှက်''အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုကြသည်။ အပုပ် အသိုးနှင့် အသေကောင်တို့ကို စားသောကြောင့် အောက် လမ်း၊ မကောင်းဆိုးရွား စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော ''ငှက်'' အဖြစ်လည်း လူတွေက ကြောက်လန့်ရွံရှာကြသည်။ ''ကျက်သရေမင်္ဂလာမရှိသော ငှက်''အဖြစ်လည်း သတ် မှတ်ထားကြသည်။ ထိုငှက်ကိုပင် မြန်မာအများစုက အတိတ်ဆိုး၊ [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-03-28T14:56:08+00:00	March 28th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments
The government takes decisive action to ensure future of Myanmar’s elephants Naypyitaw (15th-16th February 2018) The Myanmar Elephant Conservation Action Plan (known as the MECAP) was launched today ataceremony in Nay Pyi [...]
By Zin Min Htun| 2018-02-19T14:07:39+00:00	February 19th, 2018|Categories: FFI, Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments